Radio Asal 88.6 MHz – Jowhar _ Soomaaliya » AMISOM & Bulshada Rayidka Oo ka wadahadlay Xalka Dalka.
AMISOM & Bulshada Rayidka Oo ka wadahadlay Xalka Dalka.
Howlgalka Midowga Afrika Ee AMISOM iyo Bulshada Rayidka Somaaliyeed ayaa kulan ay ku yeeshen magaalada Muqdisho waxay isla eegen xiliga dheeraadka ah ee ay AMISOM ka sii howlgalidoonto dalka iyo sidii ay ku gaari lahaayeen Himilooyinkooda dhow.
Mas’uuliyiin sare oo ka tirsan qeybaha rayidka, ciidamada milatariga iyo booliska ee AMISOM iyo wakiillada bulshada rayidka ah ee Muqdisho, kuwaas oo kulan maalinle ah ku yeeshay magaalada Muqdisho Arbacadii, maanta ayaa ku baaqay in xiriir dhow lala yeesho dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay gacanta ku haayan Ciidamada AMISOM.
Kareem Adebayo, Madaxa AMISOM ee difaaca, xuquuqda aadanaha iyo qeybta jinsiga, ayaa sheegay in howlgalka Midowga Afrika uu xiriir dhaw la lahaan doono bulshada rayidka ah iyada oo abaabulaysa shirar farsamo oo bille ah iyo sidoo kale la-talin istiraatiijiyadeed oo saddex bilood ah, oo ku lug leh saraakiisha sare ee howlgalka Horkacaya.
“Waxaan isticmaali doonnaa kulamo sidan oo kale ah si aan u aqoonsano arrimaha gaarka ah ee ka soo baxa hawlaha Soomaaliya iyo in aan aragno sida aan u isticmaali karno ururrada bulshada rayidka ah si ay u buuxiyaan dhinacyada kala duwan ee ka soo baxa,” ayuu Adebayo ku yiri hadal uu soo saaray xalay.
“Bulshada rayidka ahi waa wakiillo ka socda dadka, indhaha iyo dhegaha dadka Soomaaliyeed, sidaas darteed waxaa loo baahan yahay in si firfircoon oo rasmi ah loo galo bulshada rayidka ah,” ayuu raaciyay.
Marka la eego waajibaadka cusub, AMISOM waxaa looga baahan yahay in ay ciidamadeeda soo celiso 1,000-kii Febraayo 2020-ka, si xawli ah u siiyaan ciidamada ammaanka Soomaaliya, waxay sugaan waddooyinka ugu muhiimsan, in la yareeyo khatarta ay keenaan al-Shabaab iyo in lala beegsado hawlgallo weerar ah oo taageera qorshaha kala-guurka , ka mid ah natiijooyinka kale.
Opiyo Ododa, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha madaniga ee qaabilsan arrimaha nabadgelyada iyo barnaamijka ka soo kabashada hore ayaa sheegay in xiriirka adag ee bulshada rayidka ah uu awood u siinayo barnaamijyada Mashruuca, ee loogu talagalay nolol cusub, gaaraya dadka Soomaaliyeed ee waaweyn.